Ihe ndi ozo tinyere Martech Zone
Thursday, January 1, 2009 Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Douglas Karr
M mere gafee video nke Tony Robbins at Ted nke ahụ mara mma. Otu n'ime usoro ya mere ka mụ na ya bụrụ eziokwu:
Otu n'ime ọrụ na-enye afọ ojuju m nwetụrụla bụ ịbụ Onye Nlekọta Mgbakọ Kpọmkwem Ngwaọrụ. N'oge ahụ, ExactTarget nwere interface mmemme na-enweghị oke (API) mana ndị ahịa anyị na-eto eto na akpaaka. Kwa ụbọchị bụ nzukọ na onye ahịa nwere nsogbu dị mgbagwoju anya, ọrụ m bụ iji dozie nsogbu ahụ site na iji API anyị dị mfe.
Ọtụtụ n'ime ihe ịga nke ọma m nwere n'oge ahụ bụ na m mgbe niile choputara uzo iji mezuo ihe mgbaru ọsọ. Ọ bụrụ na API akwadoghị otu usoro, m ga-eji njikọta data na oku iji merie ya. Mgbe ụfọdụ, ihe ngwọta ahụ mara mma dị nkọ (ma were ntụkwasị obi ụbụrụ iji dozie). Anyị na-ebugharị ụfọdụ n'ime ndị ọrụ na-emepụta ihe n'ihi na ngwọta anyị ga-eme nde mmadụ API na-akpọ iji mezuo ọrụ ahụ.
Isi ihe na-aga nke ọma m nwere bụ na anaghị m asị 'mba' ma ọ bụrụ. Mgbe ụfọdụ ikwesiri igbanwe ụzọ iji ruo ebe ị na-aga. Pathzọ bụ akụ. Ọ bụrụ na ọ nweghị, ịkwesịrị ịdị na-eche echiche ma wuo nke gị!
Enweghị Ihe onwunwe bụ ihe ngọpụ iji ghara ime ihe. Akụrụngwa bụ ikike ịchọta ụzọ isi mee ihe, n'agbanyeghị agbanyeghị akụ!
Nke a bụ ihe ngosi Tony Robbins zuru ezu na Ted. Dọ aka ná ntị: Ọ na-eji ụfọdụ mara mma mara mma.
ekele Angela Maiers maka ịchọta!
Tags: Krismasemail ahịa roiakụkọ ihe mere eme nke nkwado ahịaọbịaLatticeengines latticeteknụzụ ire ere
You sụọla ngọngọ?
Facebook bụ New AOL
Jan 2, 2009 na 4: 05 AM
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ a, na ịge ntị na teepu Robbins, elere m anya na afọ ọhụrụ m, dọwara ha ma dee naanị otu mkpebi ọhụrụ: "Naanị mee ya". Rịba ama na ekwaghị m: “Mee ya”.
Mgbe m bụ onye isi ahịa na ndị ọrụ goro m ọrụ, ana m agwa ha mgbe niile na ọrụ ha bụ ime ka ere ya ghara ire ya. Ihe dị iche bụ iji ihe niile dịnụ iji mechie ire ahụ ma ọ bụrụ na akụrụngwa adịghị adị iji mepụta ha ma ọ bụ bụrụ ndị nwere ike ịkọwa.
Nke a bụ nnukwu post iji malite afọ.
Jenụwarị 3, 2009 na 1:46 PM
Kedu ụzọ kachasị mma kachasị mma ka ndị otu gị si ghọta ma zaghachi mkpali a?
Kedu ihe m ga - eme iji kuzie nke a ọfụma?
Jenụwarị 3, 2009 na 2:52 PM
Ọ na-amalite site na onye ndu, Derek. Nnukwu ndị isi na-ewepụ ihe ngọpụ. Ọ dị mma ịsị 'mba', mana ọ gaghị adị mma ịsị 'anyị enweghị ike n'ihi na…'. Ọ bụrụ na azụmaahịa maara na ọ ga-eme ihe, ọ dị ha mkpa iji akọ chọpụta ụzọ ọ ga-esi.
Jenụwarị 2, 2009 na 2:11 PM
Daalụ maka ịkekọrịta nke a - na-akpali akpali ma baa uru.
Jenụwarị 2, 2009 na 4:40 PM
Naanị mee ya ka SMB na-ekwu. Otu n'ime ihe ndị kacha sie ike m meriri na ndụ m bụ ịghọta na oge mbụ m mere ihe ọ gaghị ezu oke mana na mbọ ọ bụla m na-eme ka m mee ihe na-eme ka ọ bịaruo nso.